इतिहास : बंगलादेशविरुद्ध नेपाल अपराजित - Khelpati
इतिहास : बंगलादेशविरुद्ध नेपाल अपराजित
काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशको महिला राष्ट्रिय टिमबीच आज दशरथ रंगशालामा मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुँदैछ ।
नेपाल र बंगलादेशबीचको खेल अपरान्ह ५ बजे सुरु हुनेछ।
एएफसी महिला एसियन कप-२०२२ छनोटको तयारीका लागि नेपालले बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो । दोस्रो मैत्रीपूर्ण आइतबार हुनेछ।
यी दुई देशबीचको खेलको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो, नेपाल बंगलादेशविरुद्ध अहिलेसम्म अपराजित रहेको छ ।
अर्थात नेपालले अहिलेसम्म बंगलादेशविरुद्ध खेलेका ६ खेलमध्ये कुनैमा पनि हार सामना गर्नु परेको छैन् । एक प्रकारले भन्दा नेपाल बंगलादेशमाथि हाबी रहँदै आएको छ ।
दक्षिण एसियाली देशबीच एक आपसमा भिड्ने अवसर दुई प्रमुख प्रतियोगिताले जुराउने गरेको छ । त्यसमा पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुद भने अर्को वुमेन्स साफ च्याम्पियनसिप ।
खेलपाटीले यी दुई देशबीच अहिलेसम्म भएका खेलको इतिहास पल्टाउने प्रयास गरेको छ ।
१. सन् २०१० जनवरी २९, ढाका
नेपालले पहिलो पल्ट बंगलादेशको सामना गरेको भनेको सन् २०१० को दक्षिण एसियाली खेलकुदमा हो । बंगलादेशले त्यस संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुदको आयोजना गर्दा महिला फुटबललाई पनि समावेश गरेको थियो । दक्षिण एसियाली खेलकुदमा महिला फुटबलले प्रवेश पाएको यो नै पहिलो पल्ट हो । लिग चरणमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा बंगलादेशलाई १–० ले पराजित गर्न सफल रह्यो । खेलको निर्णायक गोल जमुना गुरुङले गरिन् ।
२. सन् २०१० डिसेम्बर २१, कक्स बजार
दुई देशबीचको पहिलो खेलको एक वर्ष बित्दा नबित्दै सन् २०१० मा फेरि उनीहरू आमना सामना भए र अवसर रह्यो, पहिलो संस्करणको वुमेम्स साफ च्याम्पियनसप । लिग चरणको यस खेलमा पनि नेपाल विजयी रह्यो र स्कोर बनेको थियो, ३–० । नेपालका लागि गोल गर्ने खेलाडी थिए, जमुना र अनु लामा । जमुनाले दुई गोल गरिन् । यसरी नेपाल र बंगलादेशबीच भएका सुरुआती दुवै खेल बंगलादेशी भूमिमै भए र दुवैमा नेपाल विजयी रह्यो ।
३. सन् २०१४ नोभेम्बर १९, इस्लामावाद
पाकिस्तानले सन् २०१४ मा तेस्रो वुमेन्स साफ च्याम्पियनसपिको आयोजना गरेको थियो र त्यसैक्रममा नेपालले तेस्रो पल्ट बंगलादेशको सामना गर्‍यो । यसपल्टको भेट भने लिग चरणमा थिएन्, सेमिफाइनलमा थियो ।
यसरी नेपालले पहिलो पल्ट नकआउट चरणमा बंगलादेशको सामना गर्‍यो । यसमा पनि नेपाल १–० को जित निकाल्न सफल रह्यो र टिमले फाइनल यात्रा तय गर्न सफल रह्यो । यस खेलको निर्णायक गोल सजना रानाको नाममा रह्यो ।
४. सन् २०१६ फेब्रवरी ५, सिलोङ
भारतले आयोजना गरेको सन् २०१६ को दक्षिण एसियाली खेलकुदको महिला फुटबल सिलोङमा भएको थियो । यसपल्ट नेपाल र भारतको भेट फेरि लिग चरणमै भएको थियो, एउटै समूहमा परेपछि । यसमा नेपाल फेरि एकपल्ट ३–० को प्रभावशाली जित निकाल्न सफल रह्यो ।
लिग चरणमा यो नेपालको पहिलो खेल थियो र यसबाटै नेपाल लय समात्न सफल रह्यो । यस खेलमा तीन खेलाडीले एक एक गोल गरे र ती थिए, दीपा अधिकारी, अनु लामा र निरु थापा ।
नेपालको पूर्वी सहर विराटनगरले सन् २०१९ मा साफ च्याम्पियनसिपको आयोजना गरेको थियो र बंगलादेशसँग नेपालको भेट फेरि एक पल्ट समूह चरणमा भएको थियो । यसपल्ट भने नेपाल आरामदायी जित निकाल्न सफल रह्यो ।
नेपालका लागि सावित्रा भण्डारी र अन्जली कुमारी योञ्जनले एक एक गोल गरे । अर्को एक गोल आत्मघाती रह्यो । यी देशबीच नेपाली भूमिमा भएको यो नै पहिलो खेल हो । अब यही खेलपछि काठमाडौंमा पहिलो पल्ट नेपाल र बंगलादेश भिड्ने छन् ।
भारत चौथो पल्ट च्याम्पियन
माल्दिभ्स पहिलो पल्ट च्याम्पियन बन्दा
साफ विशेष : कराँची साफमा नयाँ पुस्ताको उदय